“Super Human Being… – PVTV Myanmar
“Super Human Being
92.0 mama by Han Htue Lwin
Like – 12K Share – 1303
War Nu Linn says:
2021-06-04 at 8:21 PM
အတွေးတူတယ် ငယ်ငယ် ကသင်ရတဲ့ ကျန်စစ်သား ငထွေးရူး ငလုံလက်ဖယ် ညောင်ဦးဖီ ဆိုတဲ့လူတွေ စစ်သည်၄သိန်းညီတယ် ဆိုတာ လုံးဝ အယုံကြည်မရှိခဲ့ဖူးရယ် တကိုးရှင်လိုလို နတ်ဖုရားလိုလို တွေ
ထန်းပင် တပင်စီခုန်ကျော် ဘာညာ ဘာညာ ဆိုတာလဲယုံဖူးရယ် အစွမ်းရှိမယ် သန်မာ ယုံဆို လုံလောက် ပီလေဂျင်းထည့်ခံရတာ တွေပေါ့ အဟီး
ကျားပေါက် ပြောတာ အားလုံး လက်ခံတယ်
မြောက်ကိုးရီးယားက ကြိုးကြာတွေ လိုပေါ့အေ့
Audrey D'Silva says:
2021-06-04 at 8:23 PM
Your right bro!! They are really bull shit..
2021-06-04 at 8:27 PM
အသိပညာ မျှ​ဝေ​ပေးလို့ ​ကျေးဇူးတင်းတယ်အကို​ရေ အဆို​​တော် ဘဝကလဲ အားကျ​လေးစားခဲ့ပါ​သေးတယ်
2021-06-04 at 8:35 PM
Tbh I’m not interested in podcast usually and this one pop up on my timeline. It played automatically so I was like, well what he gonna say in this. Well you surprised me big time! Now I end up listening the whole podcast and finding more of this. Thanks for sharing.
Ko Han Htue Lwin, suchabrilliant narrator with tons of knowledge.
Mathan Kuku says:
လုံးဝထောက်ခံတယ် ငယ်ငယ်ထဲက သမိုင်းကိုမကြိုက်ဘူး over တွေပါတယ်ဆိုပြီး😁
Tin Mg Mg Myint says:
2021-06-04 at 8:55 PM
အမှန်ပဲ political ပိုင်းတွေမသင်ပဲ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့သူတွေကိုနတ်ဘုရားပုံစံစွမ်းအားရှင်ပုံစံကိုးကွယ်ချင်အောင်သင်တာ။ ကျန်စစ်သားကမင်းဖစ်တယ် ကျန်တဲ့သုံးယောက်ကဘယ်ရောက်သွားလဲတွေးဖူးတယ် လှံရောပဲ
2021-06-04 at 8:56 PM
Think outside the box is good
Zay Yar Lin says:
လုံး ၀ အမှန် တေ ပဲ ကို ကျား ရေ ကျေး ဇူး ပါ ။ very good ခု လို sharing လုပ် ပေး တဲ့ အ တွက် ကျေး ဇူး ပါ။ ငယ် ငယ် တည်း က ဂျင်း ထည့် ခံ ရ တဲ့ ဟာ တေ 🤏🥴
2021-06-04 at 9:15 PM
အကွက်စေ့ ဒေါင့်စေ့ ယုတ်မာဖို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေပေါ့၊ လာအုံးမယ် သွေးခွဲရေး အမျိုး ဘာသာ သာသနာ လူမျိုးရေး နဲ့ အုပ်ချုပ်ဖို့လုပ်အုံးမှာ၊
ဦးဏှောက်က ကလိန်ကကျစ်ကျဖို့ အာဏာရှင်အဆက်ဆက် ရှင်သန်လာအောင် ခွေးအုပ်ထဲလူကောင်းပါရင်တောင် ရှင်းပစ်နေကြတာ အချင်းချင်း😡😡😡
2021-06-04 at 10:07 PM
စိတ်ထဲက တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခွဲထွက်ပြီး စည်းစားတတ်ဖို့ တွေးဖို့ ပြောသွားတာလေးတွေကို ကိုဟန်ထူးလွှင် ဆက်လက် စောင့်မျှော်ပါမယ်ရှင့်
အယူအဆ အတွေးအခေါ် တွေ
အခု လူငယ်လေးတွေကိုလဲ အဲ့လို ဖြစ်စေခြင်လိုက်တာ
နောက် ထပ်လဲ နားထောင်ပါရစေ
2021-06-04 at 11:48 PM
နား​ထောင်ရတာနှစ်သက်ဖို့လည်း​ကောင်းသလို ရယ်ဖို့လည်း​ကောင်းတယ် ကျွန်​တော်ကြိုက်တယ်ဗျာ
Warren DW says:
good facts you have been discussed many year all the young children learned wrong historical fact by Junta keep it on this discussion for our future generation with right path way
ကျောက်ဖျာပေါ်က ခြေရာတွေတွေ့တိုင်း တွေးမိနေတာ
ဘာလို့ ခြေထောက်က အဲ့လောက်ကြီးနေရလဲပေါ့🤔
အကိုပြောတာ လက်ခံတယ်။ ငယ်ငယ်က သူများကပြောရင် ကိုယ်ဖတ်ထားတဲ့ သမိုင်းစာအုပ်နဲ့လွဲ လက်မခံချင်တဲ့ စိတ်ဖြစ်ဖူးတယ်။ မြန်မာဘုရင်တွေကိုလဲ အထင်ကြီးဖူးတယ် စာသင်ခဲ့ရတဲ့ နာမည်ကြီး ဘုရင်တွေကိုပေါ့။ အခုနောက်ပိုင်း မှားမှန်း ဂျင်းမှန်းသိလာတော့ အမှန်တရာကိုလက်ခံရတာပေါ့
2021-06-05 at 7:04 AM
ဒါပဲသင် ဒါပဲကျက် ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုလိုက်မလုပ်နဲ့ ပြောရရင် ဖင်ခံခိုင်းတဲ့ အတွေးတွေပဲ စစ်အစိုးရစီမှာရှိတယ် ဒါကိုလက်ခံတဲ့လူကလည်း ရှင်းပါတယ် ဖင်ခံချင်လို့ လက်ခံတာ
2021-06-05 at 7:55 AM
ကလေး လူကြီး အားလုံး အတွက်၊အလွန်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။
Theinge Sein says:
2021-06-05 at 10:29 AM
မွန္တယ္ ။ အဲ့လိုအသိမ်ိဳးေတြးဖူးခဲ့တယ္ ျဖစ္မိတယ္။
Phyo Wai Naung says:
မိုက္တယ္ဗ်ာ အခုအစီအစဉ္ကို ဒီအစဉ္ကို နားေထာင္ေနသူေတြထဲမွာ အဂ္လိပ္စာ သိပ္မတက္တဲ့သူေတြပါတယ္ အဂ္လိပ္လိုေတာ့ ေျပာပါ ဘာသာေလးေတာ့ျပန္ေပးပါ အဂ္လိုေလးေတြ ဆက္တိုက္ေျပာလိုက္ရင္ တခ်ိဳ႕က ဘာမွန္မသိလိုက္ဘူးေပါ့ အၿမဲ အားေပးေနပါတယ္
Phway Sein says:
2021-06-05 at 2:04 PM
တကယ့်ကို လက်တွေ့ကျတဲ့ အတွေးလေးတွေ သိရကြားရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပုဂံရာဇဝင်ထဲမှာ ပျူစောထီးရဲ့ ရာဇဝင်ကို ဟိုးတုန်းကထဲက သံသယရှိခဲ့တာလဲအမှန်ပါ ငှက်တကောင်ရဲ့ နှုတ်သီးရာဟာ မိုင်နဲ့ချီရှည်လျားပြီးနက်တဲ့ရေတွင်းကြီးဖြစ်သွားရတယ်ဆိုတာကအစပေါ့ ကိုယ်တွေလဲပဲ ကလေးဘဝထဲက တနည်းတဖုံ brain washed ခံခဲ့ကြရတာပါလား
Htet Phyo Aung says:
ကျနော် သိထားတဲ့သမိုင်းတော်တော်များများက ဂျင်းတွေပြည့်နေတယ်
ဥပမာ_အနော်ရထာရထာမင်း ကျွဲ ခတ်လို့သေတယ်ဆိုပဲ
ကျွဲတစ်ကောင် ဘယ်လောက်ကြီးပဲ ကြမ်းထော်နေပါစေ နန်းတော်ထိတော့ လာမသောင်ကျန်းနိုင်ဘူး
သတင်းအရမ်းကြီးနေလို့ နန်းတော်အထိ သတင်းပေါက်ပါစေဦး ဘုရင့်နားအထိရောက်ဖို့ဆိုတာဝေးပါတယ်
ဘုရင်တပါးက သူကိုယ်တိုင်သွားနှိမ်နင်းတယ် ဆိုပဲ
အဲ့ဒေသက ရဲမက်တွေ စောက်ပေါတွေလားပေါ့နော်
ဒါမှမဟုတ် သေချင်လို့ပဲ တမင်သွားတာလား haw haw
တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်ရော အလောင်းပါပျောက်နေတာ စဥ်းစားစရာပါ
အဲ့လို ဂျင်းတွေ ချည်းပြည့်နေပါတယ် ခင်ဗျာ
Khin Ni Ni says:
2021-06-05 at 3:32 PM
စနစ်တကျဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပညာ​ရေးကို​​နောင်လူငယ်ခ​လေး​တွေအထိမခံရ​အောင်​​ထောက်ပြ​ေ၀ဖန်​ပေးလို့thank u so muchပါ
2021-06-05 at 4:01 PM
တန္ ခိုး ႐ွင္ ေတြ လူ စြမ္း ေကာင္း ေတြ နဲ႔ သင္ ၾကား ဖူး ၾကေတာ့ ကိုယ္ တိုင္ ဘဲ ဖို ထိုး ၿပီး ေျမ လ်ိွး မိုး ပ်ံ ရေတာ့ မလို လို ေပါ့ ဗ်ာ စိတ္ ကူးယဥ္ ဆန္ တဲ့ အေတြး ေခၚ ေတြ ေပါ့ ဗ်ာ
2021-06-05 at 4:18 PM
hzhzjjhhxbbbcnnnndjdjdnddndnfnfnffnfnnfnfnfnnnccn cbcbbcccccccc’ z?zz.xx.njgfcmmn cvbbbbvvvvvvvvvv hbhhuunjjjj vcc vb bcxvvvbbbhgvc cvvvv nvcxcvbbvvbbbbbb
Htet Zaya says:
2021-06-05 at 4:25 PM
ပုပ္ပါးးမှာ မယ်၀ဏ ဆိုလည်း သထုံဘုရင် မနုဟာမင်းးက တောထွက်ပီး တရားအားထုတ်တော့ သူ့ညီမ ဖစ်သူ မယ်၀ဏ ရော တူတူပေါ့ဗျာ အခုကျ ပန်းစားဘီလှူးမ ဆိုပီး ဂျင်း ထည့်ပေးးထားတာ 🙄
နောက်ဆို တိုင်းပြည်ရဲ့ နယ်ပယ်စုံ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် လူတိုင်းက တော်လှန်ကြရမယ် စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်သလိုမျိုးပေါ့
Precious Htun says:
Ma Kaythi မီး နား​ထောင်ကြည့်ပါ
DawMon MonAye says:
2021-06-06 at 10:28 AM
Kyi Thanda Oo says:
2021-06-06 at 7:39 PM
2021-06-06 at 8:13 PM
Really impressive and good to listen
2021-06-06 at 9:03 PM
Ko Arka says:
2021-06-08 at 2:16 AM
စိတ်ဝင်စားအောင် သေသေချာချာ ပြောပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ။
Pho Khwa says:
2021-06-08 at 7:41 AM
Should ask ko kyar for his approval to post this podcast.
Respect the copy right.
ငယ်ငယ်ကတည်းက မေးခွန်းတွေပြန်ပြန်မေးတတ်လို့ အမေသေချာရှင်းပြရတယ်. ထုံးတမ်းစဥ်လာတွေကိုဘာကြောင့် အားလုံးကိုယုံကြည်ရမလဲ ဆိုတာအမြဲမေးဖြစ်တယ်. တခုခုဆို သိပ်မယုံတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် အစွန်းရောက်တာသိပ်မဖြစ်ဘူး.ကိုယ်သိချင်ပြီဆိုရင်လဲ လိုက်မေးတတ်တယ်.
Khaing Sandar Hla Myint says:
2021-06-08 at 6:30 PM
2021-06-09 at 8:13 AM
Win War Aye Ko says:
More Story about North Korea & South Korean pls, quite similar as Myanmar. . Good catch, Well done 👍
ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဝိဘဇ္ဇဝါဒကို တည့်တည့်ကြီးမြင်ရပါတယ်